Product Factory | Mpanamboatra sy mpamatsy entana any Chine
Ny ETEX dia manome andiany feno singa jamba ho an'ny Roller, Vertical, Zerba Blinds, Roman Blinds. Amin'ny alàlan'ny famolavolana mba hifanaraka amin'ny rafitra jamba samihafa eo amin'ny tsen'izao tontolo izao, dia mamolavola sy mamorona ny singa sy ny zavatra voafaritra samihafa ho an'ny jamba samihafa izahay, izay amidy malaza any Eropa, Azia, Latin-American, Australia, firenena Mid-East. Misy ny fahaizana mamolavola lasitra vaovao ho an'ny filana mpanjifa, vidiny ara-drariny ary kalitao matanjaka. Ny akon'ny singa misy anay dia POM, PVC avo lenta, ...
Jamba kodiarana: jiro lamba vita amin'ny lamba dia lasa malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao izao ho an'ny fanaka varavarankely. Hararaoty ny fampiasana mora foana, fomba tsotra, safidy tsy misy farany vita amin'ny lamba. Ny olona dia mifidy jamba Roller bebe kokoa hatrany ho an'ny haingo. Ny blinds roller blindmade dia manome andian-dahatsoratra feno sy lamba hafa mifandraika, ny mpanjifa dia afaka manokatra sy mametraka azy DIY. Mora mametraka ary mora ova. Fomba jamba Roller: jamba Roller dia vahaolana mahomby sy mahomby ary azo tanterahina amin'ny fikandrana ...
Mamokatra jamba marobe isan-karazany izahay. Karazana: ● Jamba ny Venetiana Wood, Jamba Venetiana Bamboo ● Jiro PVC Faux Wood Venetian Blinds ● jamba aluminiana aluminiana dia misy karazana rafitra hafa izay tokony hampiasaina amin'ny jamba venetiana: ● Rafitra ● ● Rafitra ● Rafitra mifanila amin'ny jamba Venetian, indraindray antsoina hoe jamba slat na ny jamba miolom-bolo, manaova safidy tsara ho an'ny ambainy ary afaka mamorona endrika tsara sy maoderina ao an-tranonao. Izahay dia manana jiro vita amin'ny hazo vetaveta, aluminium vene ...
Blinds menaka no varavarankely mahazatra indrindra manarona ny vokatra. Ny asany miaraka amin'ny fanamorana maivana sy fanitsiana. Miorina amin'ny karazan-damba vita amin'ny lamba volon-doha, Vertical Blind no safidy sy be indrindra hampifanaraka ny filanao. Fitaovana: 100% Polyester Width: 89/100 / 127mm Vane System: Chain / Wand System Fabric Design: Plain, Jacquard, Blackout, FR .. Aluminum: Narrow, Square, High, Low track Ny jamba mitsivalana dia mamarana efitrano. Manampy amin'ny fitazonana ny fiainana manokana izy ireo, mifehy ny hafanana, ary mijanona b ...
Zebra jamba manome tsiambaratelo ary manome lamaody any amin'ny toerana rehetra. lasa lamaody bebe kokoa amin'ny indostrian'ny masoandro mamirapiratra satria manampy lamaody tsotra kokoa eo am-baravarankely, mora miasa, mora soloina. Tsy vitan'ny hanome aingam-panahy ny lamaody sy ny hevitra amin'ny lamba ihany koa isika, dia manaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny vokatra lamba. Ny ETEX dia mamorona mihoatra ny 100 manamboatra lamba vaovao sy fitaovana lamaody avo lenta. ● Fizarana: 100% polyester na PVC Sunscreen zebra ● Coating: Acidlic Acid ● ...
Romana Blinds nahazo aingam-panahy tamin'ny lamba fanamboarana malefaka izay manome fahatsapana malefaka sy malefaka ho an'ny efitra. ● Rafitra: Rafitra fanaraha-maso / kordika ● Modely: Plain, Jacquard, Flocking, Blackout, Translucent, lamba, lamba fanamarinana afo ● lamba: fanjaitra karazana kitapom-batana ● Fitaovana fanjaitra ho an'ny jamba tsirairay Romanina romanina hitafy ny varavarankelinao amin'ny fangatahana mahafinaritra. . Na tianao ny modely nentim-paharazana ho an'ny lakozia, na ny jiro modely floral ho an'ny seho, mety amin'ny famerana ny masoandro ...